Okwu mmalite nke grinders n'ala nwere isi dị iche iche
Dị ka ọnụ ọgụgụ nke egweri isi maka n'ala grinder, anyị nwere ike tumadi nkewa ha n'ime n'okpuru ụdị. Igwe ihe igwe otu isi nke otu isi nwere ogwe nrụpụta ike nke na-ebugharị otu diski egweri. N'elu obere igwe ihe n'ala, enwere naanị otu diski egweri n'isi, ị...
Ichicha mabul na polishing bụ usoro ikpeazụ maka usoro ọgwụgwọ gara aga nke nlekọta nkume kristal ma ọ bụ nhazi efere ọkụ nkume. Ọ bụ otu n'ime usoro kachasị mkpa na nlekọta nkume taa, n'adịghị ka ụlọ ọrụ ihicha ụlọ ọrụ omenala na-asachapụ mabul ihicha na ịwasị. T...
Nnyocha na usoro nhazi nkume, ihe ndị bụ isi na-emetụta mmetụta na-egbuke egbuke na nkà na ụzụ na-egbuke egbuke nkume, na-ezo aka n'elu nkume dị mma. Mgbe ọtụtụ afọ ejirichara yana ihu igwe okike ya, yana nlekọta na-ezighi ezi nke mmadụ mere, ọ dị mfe ime ka ọ…
"Nano-polycrystalline diamond" na-enweta ike kachasị elu ruo ugbu a
Otu nyocha nke mejupụtara Ph.D nwa akwụkwọ Kento Katairi na osote Prọfesọ Masayoshi Ozaki nke Ụlọ Akwụkwọ Gụsịrị Akwụkwọ na Injinia, Mahadum Osaka, Japan, na Prọfesọ Toruo Iriya sitere na Research Center for Deep Earth Dynamics nke Mahadum Ehime, na ndị ọzọ, akọwaala nke a. ike nke...
Usoro mmepe nke diamond hụrụ agụba- nkọ
Site na mmepe nke ọha mmadụ na ọganihu nke ihe a kpọrọ mmadụ, ọnụ ahịa ọrụ na mba Europe na America adịla elu nke ukwuu, uru ọrụ nke obodo m na-eji nwayọọ nwayọọ na-efunahụ. Ịrụ ọrụ dị elu aghọwo isiokwu nke mmepe nke ọha mmadụ. N'otu aka ahụ, maka diamond hụrụ bl ...